“Faly Amin’ny Fanohizan’i Assad Ny Famonoana ireo Siriana izao Tontolo izao” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2013 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Deutsch, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana ao Syria ity lahatsoratra ity.
Vao avy nanambara i Syria fa vonona ny hametraka ireo ambina fitaovam-piadiana simikany ho eo ambanin'ny fanaraha-maso iraisam-pirenena izy – ary avy eo hamotika izany, eo ambanin'ny fifanarahana iray vaovao nosoratan'i Rosia. Milaza ireo mahery fo fa ny hanome ny filoha siriana Bashar Al Assad fotoana mba hanohizany ny famonoana ireo vahoaka amin'ny alalan'ny fiadiana hafa eo ampelatanany io paikady io.
Ny tanjon'io fifanarahana io dia ny hialàna amin'ny fanafihan'ny Amerikana an'i Syria, izay voampanga ho nampiasa fitaovam-piadiana simika tamin'ny vahoaka Syriana. Araka ireo antontan'isan'ny ONU, olona 100.000 no maty fara fahakeliny ary maherin'ny 2 tapitrisa no voatery nandositra ny tanindrazany hatramin'ny nanombohan'ireo hetsi-panoherana an'i Assad ny volana Martsa 2011.
Manana rakitsary mikasika ny fitaovam-piadiana simika natolotr'i #Russia ny fahitalavi-panjakan'i #Syria
Manana rakitsary mikasika ny sos-kevitra momba ny fitaovam-piadiana simika natolotr'i #Russia ny fahitalavi-panjakan'i #Syria
Ireo tetiandro momba ny fanambarana nataon'i #Russia sy #Syria ary ny vaovao mahaliana tao amin'ny fahitalavi-panjakana Siriana dia manambara fa efa voalamina tsara daholo izany
Varavaran-kivoahana hoan'i Obama ve ny soso-kevitra natolotr'i #Russia? Moa ve izany làlana ho an'i #Syria hamikotra ny UN + izao tontolo izao anatina fisavana maharitra ny fitaovam-piadiana simika/fanaraha-maso ny fifandrohizana ara-biraokratika?
Varavaran-kivoahana hoan'i Obama ve ny sosokevitra natolotr'i #Russia? Moa ve izany làlana ho an'i #Syria hamatorana ny UN + izao tontolo izao anatinà fisavàna/fanaraha-maso ara-biraokratika maharitra ny fitaovam-piadiana simika?
Manontany tena ireo #Syrians ankehitriny raha nataony hakana toky fotsiny ny tsy hilatsahan'ireo fitovam-piadina simika maro “am-pelatànan'olona ratsy eritreritra” ny fandrahonan'i #US handefa ny miaramilany hirotsaka an-tsehatra (AQ sy Hizbullah)
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ireo Hetsi-panoherana ao Syria ity lahatsoratra ity.